Imaaraadka Oo Soo Dhoweeyey Go’aan Ka Soo Baxay Madaxweyne Trump – Ilays News
[ June 18, 2019 ] Askar Ka Tirsan Ciidamada Qaranka Somaliland Oo Dil Iskugu Gaystay Gudaha Magaalada Hargeysa	Featured
[ June 18, 2019 ] Madaxdhaqameedka Sanaag Oo Ka Hadlay Arimaha Nabada War Cusubna Ka Soo Saaray + [ Muuqaal ]	Featured
[ June 18, 2019 ] Madaxweynihii Hore Ee Masar Maxamed Morsi Oo Maxkamad Ku Dhex Geeriyooday	Featured
[ June 17, 2019 ] Hogaamiyaha Waddani Oo Falanqeeyey Sida Ay Siyaasad Xumidu U Horseedo Hogaanka Xun.	Featured
[ June 17, 2019 ] Xisbiga UCID Oo Boqor Buurmadow Ka Difaacay Eedeymo Madaxweyne Muuse Biixi U Soo Jeediyey + [ Muuqaal ]	Featured
Imaaraadka Oo Soo Dhoweeyey Go’aan Ka Soo Baxay Madaxweyne Trump
April 17, 2019 admin1
Dubai (Ilays-News):- Imaaraadka Carabta ayaa tallaabo muhiim ah ku qeexay go’aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu codka diidmada qayaxan ugu adeegsadan qaraar congress-ka Mareykanka uu ku amray in lasoo afjaro ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dalka Yemen.
“Xaqiijinta madaxweyne Trump ee taageerada Isbahaysiga Carabta ee Yemen waa astaan wanaagsan oo muujinaysa taageerada Mareykanka ee ku wajahan isbaysigiisa Carabta” waxaa sidaas yidhi wasiiru dowlaha arrimaha dibedda Imaaraadka Anwar Gargash oo qoraal soo dhigay twitter.
“Go’aanka muhiimka ah ee Trump waa mid xeeladeed oo waqtigii loo baahnaa yimid” ayuu yidhi Gargash oo dowladdiisa ay dagaalka Yemen xulufo kula tahay Sacuudiga.
Trump ayaa go’aanka congress-ka ay ku diideen dagaalka Yemen ku qeexay mid aan loo baahneyn oo ah isku day halis ah oo wiiqaya awoodihiisa dastuuriga, islamarkaana halis gelinaya nolosha askarta Mareykanka.
Trump ayaa sidoo kale sheegay in qaraarka congress-ka uu dhaawacayo siyaasadda arrimaha dibedda Mareykanka iyo xiriirka Mareykanka uu la leeyahay dalalka kale.
Hargeysa (Ilays-News):- Magaalada Hargeysa waxaa laga hir galiyey warshad cusub […]